Depiote Brunelle Tsy mifankahazo amin’ny mpitondra intsony ?
Niteraka resa-be ny tsy fahazoan` ny depiote voafidy tao Ikongo, Brunelle Razafitsiandraofa, izay lany tamin` ny alalan` vondrona IRD, miteny sy miseho amin` ny haino aman-jerim-panjakana (RNM/TVM).
Hetsika atao any Fianarantsoa Tsy noraisin’ny prefe ny delegasionin’ny TIM
Tsy noraisin’ny prefen’i Fianarantsoa omaly ireo delegasionina hampahafantatra ny tatitra ataon’ny depiote mpanohitra ny fitondrana ao amin’ny Magro Fianarantsoa rahampitso sabotsy.
Antenimieram-pirenena Hamerina ny fitokisan` ny olom-pirenena aminy
Nanatanteraka atrikasa fampiofanana ireo filoham-baomiera maharitra sy filohan’ny vondrona parlemantera eo anivon` ny Antenimieram-pirenena mandritry ny hateloana tany Antsirabe niarahana tamin` ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) .
Fifidianana loholona Mandeha sahady ny fampielezan-kevitra
Raha mbola amin` ny 18 novambra izao no voafaritra ny daty hanombohana ny fampielezan-kevitra ho amin` ny fifidianana izay ho loholona amin`ny 11 desambra izao saingy efa misy sahady no tsy mahandry tantana.
Antoko Natiora “Fotoana tokony hahafahan’ny Malagasy mivoatra izao”
Izao no fotoana tokony hahafahan’ny Malagasy mivoatra sy miseho, hoy ny antoko politika Natiora, tarihin’ny filohany Mihari-Ni-Rencho.
Tsy ampy fahalalana ny Malagasy Vao mainka koa manabado ny mpitondra
Mihevitra ny Malagasy ho bado ny mpitondra eto amintsika. Porofon’izany, ohatra, ny filazan’izy ireo zavatra izay iaraha-mahalala izao fa tsy mitombina. Manamora ny fanambakana ataon’ny mpitondra ihany koa ny fari-pahalalan’ny Malagasy.
Solombavambahoaka Hanao tamberin`andraikitra misimisy kokoa
Nihaona tamin’ny Birao Maharitry ny Antenimieram-pirenena izay notarihin’ny Filohany Razanamahasoa Christine ny Fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena sy ireo rafitra maro samihafa, omaly.
Fihetsika azo adika avy hatrany fa mitandrina mafy sy tsy te haneho hevitra aloha izy. Manomboka mangotraka ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao, na mety hohamaivanin’ny eo amin’ny fitondrana aza. Efa fikorontanana goavana ara-panjakana sy ady eo amin’ny samy andrim-panjakana ny fanamelohana ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) sy ny tsy fanekena intsony ny CENI nataon’ireo vondrona parlemantera sy antoko politika tetsy amin’ny Panorama ny 17 septambra. Ny HCC no arofanina farany amin’ny resaka lalàna, ary tompon’ny teny farany sy ny didy tsy azo hivalozana. Io anefa fa manomboka miseho masoandro ny fanoherana ny fanapahan-kevitr’ity andrim-panjakana ity, izay sokajian’ny avy aty amin’ny ankolafin-kery mpanohitra ho lasa fitaovana politikan’ny mpitondra sy tsy mitsara araka ny lalàna sy ny ara-drariny. Andrim-panjakana sokajiana ho miantoka ny filaminana sy fitoniana (garant de la stabilité) ny HCC, saingy manomboka mitsingilaila ny toerany, raha halalinina. Rehefa ny HCC no tsy azo itokisana intsony, dia mety hiteraka olana sy krizy, ary efa nanomboka ny taona 1996, 2001-2002, 2009, 2018… nisiana krizy io, hoy ny mpanao politika. Samy lasa saina ny rehetra : hipasoka ny efa malama ve ny HCC amin’ny fanapahan-kevitra havoakany, sa hitsipaka ny fanapahan-kevitry ny fitondrana sa hamoaka indray ilay “Pacte de responsabilité” tahaka ny tamin’ny fitondrana HVM ?